Fironana 5 hafa amin'ny famolavolana tranonkala 2015 | Famoronana an-tserasera
Fironana 5 hafa amin'ny famolavolana tranonkala 2015
Andro vitsy lasa izay dia nanoratra ny famenon'ity lahatsoratra ity miaraka amin'ny hafa aho Fironana 5 amin'ny famolavolana tranonkala izay nanamarika ny 2015. Mijery ny sasany amin'ireo fironana tranonkala lehibe indrindra amin'ny taona. Araka ny nanoratako tao amin'ilay lahatsoratra nampifandraisiko teo aloha, dia nomarihin'izy ireo ihany koa ny Scrolling lava be, famolavolana karatra, endrika tsotra, ny sary mihetsika mahery and with sary mahavariana. Ankehitriny dia asehonay anao ny fironana 5 hafa amin'ny Famolavolana tranonkala 2015, Manantena aho fa tianao izy ireo.
1 Sary niainga tamin'ny HD
2 Endritsoratra sahisahy
4 Loko marevaka
Sary niainga tamin'ny HD
Miara-miasa amin'ny fironana amin'ny sary avo lenta, ny fampiasana ny vola (fiaviana) de Famaritana avo nitombo ihany koa ny lazan'izy ireo tamin'ity taona ity. Hitanay ny kalitaon'ny famaritana avo lenta ho an'ny horonan-tsary, izay ahafahan'ny mpizaha sy ny haingam-pandeha Internet mahazaka horonantsary sy fiaviana sinema bebe kokoa amin'ny vahaolana avo lenta, mirona hifandray am-po amin'ny mpampiasa izy ireo, mampiseho asa lehibe.
Rehefa miresaka isika HD dia fanapahan-kevitra avo kokoa noho ny 200 dpi (dpi), raha 72 ppi kosa ny famaritana mahazatra. Izany dia mahatonga ny sary namboarina tao amin'ny SD ho manjavozavo, midika izany fa tsy ho tsikaritr'ireo mpampiasa manana efijery SD ny fahasamihafana, fa izay manana HD kosa hanao izany.
Miaraka amina endritsoratra maro dia maro, tsy dia nanjary fanahiana lehibe tamin'ity raharaha ity, fa ny fisian'ny endritsoratra maimaim-poana typefaces Nanomboka nitana andraikitra lehibe kokoa tamin'ny famolavolana tranonkala.
Ny typeface matevina dia misarika ny saina ho amin'ny tenany, fa tsy voatery ho voajanahary na be pitsony. Raha ny marina ny typeface tsotra indraindray no tena sahy. Miaraka amin'ny fironana fisaka sy minimalista, ny typefaces ankehitriny dia toa sahy izy io koa dia manohana ny fahatsorana. Ohatra endri-tsoratra 'sans serif' manao fanambarana an-tsary izay manatsara ny famakiana. Na inona na inona endri-tsoratra, iray amin'ireo fampiasana mahazatra indrindra amin'ny typeface amin'ity taona ity dia ny haben'ny fatratra.
Aza adino fa ny tena tanjon'ny typografia dia legibility y mora ny mamaky. Na manaitra ny endrik'endrinao aza, raha tsy takatra. Ny fampiasana tsara ny typografika kanto dia hahatonga ny mpampiasa na ny mpanjifa hisambotra kokoa amin'ny toerana iray ao amin'ny tranonkalanao izay tianao hamafisina.
ohatra (Hevitra Google)
Ny fiakaran'ny fifandraisana dia midika koa hoe fitomboan'ny microinteractions, izay misy ny fifandraisana bitika eo amin'ny fifandraisana: a feon'ny 'ding' rehefa misy mailaka na sarimiaina nalefa hisarika ny sain'ny fampandrenesana vaovao. Ny famolavolana fifampiraharahana dia ho lasa sarotra kokoa, hahatonga izany fironana izany dia hahatonga anao hijanona amin'ny tranokala lava kokoa.
ohatra (Akademia Beatbox)
Araka ny hitantsika amin'ny lazan'ny endrika fisaka, ny fironana ankapobeny miaraka vokany mahafinaritra hita maso ary maro hafa be fanantenana kokoa. Ny loko marevaka dia manolotra zavatra bebe kokoa noho ny hatsaran-tarehy misy fanantenana fotsiny. Ny lokony dia misarika ny sain'ny olona amin'ny alàlan'ny fampihenana ny mety hisian'ny tranonkala miseho ho maloka, ny minimalism izay ny fironana farany apetrako eto ambany, dia mifandray amin'io fironana fahefatra io koa. Rehefa ampiasaina mavitrika amin'ny typografika tsara dia afaka manintona ny saina amin'ny teny na andian-teny sasany ny loko. Etsy ankilany, ny loko dia manana fiasa sarobidy fahatsorana fampiasanaEritrereto ireo karatra miova loko rehefa tsindriana, izay mari-pamantarana miharihary ny fifanatonana koa.
Hofaranako amin'ny valiny hafa izany hampitombo ny fivezivezena amin'ny finday, minimalism, fomba voafaritra tsy mampiasa afa-tsy izay ilaina, na ny singa kely indrindra. Ao amin'ny ohatra napetrakay teo amin'ny faran'ny OMEGA dia tsy misy afa-tsy izay ilaina ihany: ny fikirakirana fiteny iray, ny menio azo itarina ary ny sary famantarana hiverina any amin'ny pejy lehibe.
Amin'ny fahitana, minimalism manampy rivotra be pitsiny amin'ny tranokala, na iza na iza miralenta. Fa amin'ny sehatra azo ampiharina kokoa, ny tsy fisian'ny sary, plugins, sns. mampihena ny fotoana fandefasana, manatsara ny famakiana ary mamorona interface tsotra izay azo takarina indray mipi-maso. Ny fananana singa vitsy kokoa dia mahatonga ny valin'ny mpampiasa ho mora kokoa.
Manantena aho fa tianao ireo fironana dimy ireo, ary ireo dimy hafa napetrako tao amin'ilay lahatsoratra hafa nanamarika ny famolavolana tranonkala tamin'ny 2015.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Fironana 5 hafa amin'ny famolavolana tranonkala 2015